Shiinaha Vertical power 808 755 1064 mowjado isku dhafan oo xirfadle soprano baraf diode laser timo saarista DY-DL501 Soosaarka iyo Warshadda | Daanye
Sida xal isku dhafan, barxadda Eos-baraf waxay isku daraysaa faa'iidooyinka dhammaan dhererka dhererka 3, iyadoo lagu gaarayo natiijooyin aad u wanaagsan hab kasta oo dherer-dherer ah kaligiis
Noocyada ugu ballaaran ee noocyada timaha iyo midabka.
Dhererka dhererka Alexandrite wuxuu siiyaa awood badan oo nuugista melanin chromophore, taasoo ka dhigeysa mid ku habboon noocyada timaha ee ugu ballaaran iyo midabka - gaar ahaan timo midab khafiif ah iyo khafiif ah. Dhex-dhexaad dheeri ah, dhererka dhererkiisu yahay 755nm wuxuu bartilmaameedsanayaa Bulge-ka xididdada timaha waxayna si gaar ah waxtar ugu leedahay timaha si dusha sare loogu dhejiyay meelaha sida sunnayaasha iyo dibnaha sare.(2) Xawaare 808NM WAVELENGTH
Nuska waqtiga daaweynta
Dhererka dhererka caadiga ah ee ka saarista timaha laser-ka, dhererka dhererkiisu yahay 808nm, wuxuu bixiyaa dhex-dhexaad qoto dheer ee timaha xididkiisa oo leh awood celcelis sare leh, heer ku celcelin heer sare ah iyo baaxad weyn oo loogu talagalay daaweynta degdegga ah. 808nm wuxuu leeyahay heer dhexdhexaad ah oo nuugista melanin taasoo ka dhigaysa mid u nabdoon noocyada maqaarka madow. Awooddeeda qotodheer ee qotodheerta waxay bartilmaameedsataa Bulge iyo Bulb oo ka mid ah xididdada timaha halka faleebada unugyada dhexdooda oo dhexdhexaad ah ay ka dhigeyso mid ku habboon daaweynta gacmaha, lugaha, dhabannada iyo gadhka.
Takhasus u leh noocyada maqaarka madow.
Dhererka dhererka YAG 1064 waxaa lagu gartaa nuugista melanin ee hoose, taasoo ka dhigaysa xalka diirada u saaran noocyada maqaarka madow. Isla mar ahaantaana, 1064nm waxay bixisaa qulqulka qoto dheer ee timaha, taas oo u oggolaaneysa inay bartilmaameedsato Bulb iyo Papilla, iyo sidoo kale in lagu daaweeyo timo si qoto dheer u dhex galay meelaha sida madaxa, godadka gacmaha iyo meelaha cawrada. Iyadoo nuugista biyaha sare ee dhalisa heerkul sare, isku darka dhererka dhererkiisu yahay 1064nm wuxuu kordhiyaa muuqaalka kuleylka ee daaweynta guud ee leysarka sifeynta ugu badan ee timaha.
Awood gelinta qalabka 3000W
Hore: 2020 CUSUB 360 garka Cryolipolysis iyo jirka oo caatada ah DY-Magia3
Xiga: La qaadan karo 808 755 1064 mowjado isku dhafan oo ah mashiinka saarista timaha laser diode ee xirfad-yaqaan DY-DL1A